कस्टम Inflatables निर्माता inflatable डेरा, स्टन्ट एयरबैग, बिक्री को लागी inflatable पानी पार्क | आनन्द फुलाउने
कारखाना पेशेवर कस्टम inflatable डेरा र inflatable पानी पार्क- आनन्द inflatable।
Inslfable पानी पार्क
Inglable isglo पाल
उत्तराधिकार विशाल पाल
उत्तराधिकार विज्ञापन पाल
Inflatabal औषधी पाल
Inflatable बुलबुल तन
Inflatable stentst एयरब्याग
Inflatable cube पाउल
०.9 मिमी PVC तिरपाल लेपित विनाइल
°० ° m० मिटर वजन: १00०० किलो
JOY २००१ पछि inflatable पानी पार्क, inflatable पाल र स्टन्ट एयरब्याग को लागी पेशेवर निर्माता हो।
मुख्य उत्पादनहरूमा इन्फ्लाटेबल पानी स्लाइड, फ्लोटिंग वाटर पार्क, ब्लो अप टेन्ट, इन्फ्लाटेबल स्पोर्ट्स, स्टन्ट एयरब्याग, इन्फ्लाटेबल विज्ञापन, आदि समावेश छन्।
स्कीइंगको लागि तल ग्रेज बिना ठूलो स्टुन्ट इंडेन्ट्हीन नि: शुल्क भूमि बैग
स्कीइ + HTTPS + HTTPS + https + https + https + https + https + https + HTTPS को लागि तल माथिको वेज ब्याग बिना।
मोबाइल कोरोनरस क्वारेन्टाइन इंटरेन्टिन आयुपल पाल
मोबाइल कोरिनारस आपतकालीन उद्धारको लागि करोनिनर उत्तेजित पाल, यसलाई जाँच गर्नुहोस्!
प्रशस्त अस्पताल मेडिकल मेडिकल ट्रिड अफ फेलेसन घर पहिलो सहयोगको लागि
प्रशस्त अस्पताल मेडिक मेडिकल टूड एक्लोपन घर पहिलो सहायता + HTTPS: //www.jooyinfally.com.
पार्टी पारदर्शी स्पष्ट pvc frultable Bublate Bubltail choming dome पास
पार्टी पारदर्शी स्पष्ट pvc frultable बबल क्याम्पिंग डीम पाउन्ड + HTTPS: //www.jooyinfal.choy.com
योजना: ग्राहकका आवश्यकताहरू र सरोकारहरू परिचित गर्नुहोस्; शैली, रंग, आकार, उत्पादको कारीगरी र ग्राहकको बजेट पुष्टि गर्नुहोस्; ग्राहकका आवश्यकताहरू र सरोकारहरू अनुसार सम्भाव्यता दिशा वा मस्यौदामा छलफल गर्नुहोस्।
समाधान: D D रेखाचित्र ग्राहकको आवश्यकतामा निर्भर बनाउनुहोस्; समाधान निर्धारण र सुधार गर्नुहोस्; समाधानमा विशेष नोटको साथ उत्पादन अर्डर उत्पादन गर्नुहोस्।
उत्पादन: रेखाचित्र र manufature कोर्न को लागि manufature आदेश अनुसार; उत्पादन तालिकामा अनुगमन गर्नुहोस् र ग्राहकहरूका लागि सम्बन्धित भिडियोहरू लिनुहोस्; उत्पादन परीक्षण गर्नुहोस् र जाँचको बखत भिडियो लिनुहोस्।
बिक्री पछि / प्रतिक्रिया: सम्बन्धित भिडियो पठाउनुहोस् र ग्राहकहरूसँग संवाद गर्नुहोस्; डेलिभरी फिर्ती भुक्तान गर्नुहोस् प्रयोग शर्तमा जानुहोस्।
यी सबै भिडियोहरू शूटिंग गरिएको थियो जब हामी हाम्रो शुटि team टीम, वा हाम्रो ग्राहक प्रतिक्रिया र दृश्यबाट शट द्वारा inflatable उत्पादनहरू परीक्षण गर्दछौं। मुख्य रूपमा आकार, संरचना, प्रदर्शन, रंग र हाम्रा उत्पादनहरूको प्रयोग प्रतिबिम्बित गर्दछ। यसैले यो हामीलाई सुधार गर्न अनुकूल छ ....
गुआंगजाउ जोए इन्फ्लाटेबल लिमिटेड कारखाना हो जो फुलाउन योग्य पानी पार्क, इन्फ्लाटेबल टेन्ट र स्टन्ट एयरब्यागमा विशेषज्ञता प्राप्त गर्दछ। हामी तपाईको स्थान को लागी अनुकूलित समाधान प्रदान गर्न सक्छौं। यो एक व्यक्तिगत उत्पाद संयोजन हुन सक्छ जुन तपाइँलाई विशिष्ट प्यारामिटरहरू, बजेट र आयामहरू फिट गर्दछ। Countries० देशहरूमा विगत १० बर्षको हाम्रो अनुभवको साथ हामी जान्दछौं कुन सेटअपले रमाईलो र अपरेसनको मामलामा अर्थ राख्छ।
हाम्रो उत्पादनहरू व्यापक रूपमा मनोरन्जन क्षेत्र, प्रदर्शन, साहसिक कार्य, भित्री र बाहिरी प्रयोगको लागि अन्तिम चुनौती, र पानी पार्कहरू, मनोरन्जन / आनन्द / खेल / पर्यटन गन्तव्य स्थानहरू र यस्तैमा प्रयोग हुन्छन्। हामीलाई थाहा छ, अगाडिको मार्गमा, अवसरहरू र चुनौतीहरू, प्रतिस्पर्धा र सहयोगहरू छन्। तर हामी विश्वास गर्छौं कि नयाँ ज्ञान र टेक्नोलोजीले निरन्तर विकास र नवीनताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ,
हामी सुनिश्चित गर्छौं कि हामी योग्य र उत्कृष्ट inflatable उत्पादनहरू प्रदान गर्न सक्दछौं, हाम्रा अनुभवी कार्यकर्ताहरू, उन्नत मेशिनहरू र सख्त गुणस्तर व्यवस्थापन नियन्त्रण प्रणालीको आधारमा।
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् नि: शुल्क डिजाइन प्राप्त गर्नुहोस्
Inflatable पाल र फ्लोटिंग पानी पार्क अनुकूलन मा विशेषज्ञता। हामी विभिन्न कस्टमहरू प्रदान गर्दछौं जस्तै रंग, आकार, शैली, उपस्थिति डिजाइन, कारीगरी, मुद्रण, आदि। SGS, CE, उल र सामग्री र उत्पादनहरूको लागि अन्य व्यावसायिक प्रमाणीकरणको साथ।